Shiinaha sanduuqa Qado loogu talagalay gabdhaha Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > > Bac qadada > Sanduuqa qadada ee gabdhaha
Sanduuqa qadada ee gabdhaha
Isku laabid cusub: waxaa loo furi karaa sidii miiska cuntada marka banaanka lagu ciyaarayo. Lakabka gudaha ee filimka aluminium waa biyo la'aan iyo saliid-caddeyn, iyo in wasakhda kaliya ay u baahan tahay in si tartiib ah loo tirtiro, waqti iyo dadaalna la badbaadiyo.
Sanduuqa Bento ee gabdhaha
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyn waa nashqadeynta, soo saarida iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka banaanka, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena nooca asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana mudnaanta siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar leh, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsadaada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:adamdavis@fofrerbag.com
1. Sanduuqa ugu wanaagsan ee bento ee gabdhaha - si loogu daro jacayl yar noloshaada:
(1) Waqtiga cusub ee qufulka: yaree kuleylka luminta si aad u ilaaliso heerkulka cusub iyo cuncunka cusub ee cuntada.
(2) Heerka cusub ee yurubiyanka: oo la jaan qaadaya darajada cuntada Mareykanka ee FDA iyo heerka cuntada Jarmalka ee LFGB.
(3) waara: oo loo gudbiyo shahaadada rasmiga ah ee iska caabbinta xirashada, iska caabinta saameynta iyo caabbinta laabanto.
(4) Isticmaalayaasha: shaqada, waxbarashada iyo safarka.
(5) Laabashada cusub: waxaa loo furi karaa sidii miis cuntada lagu cuno marka lagu ciyaarayo banaanka. Lakabka gudaha ee filimka aluminiumku waa mid aan biyuhu soo saarin iyo saliid aan cadeyn karin, wasakhda ayaa kaliya u baahan in si tartiib ah loo tirtiro, waqtiga iyo dadaalkana lagu badbaadinayo.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) sanduuqyada bento ee gabdhaha
Adeegyo dheeraad ah
Waa loo habeyn karaa
300D Oxford dhar + 5mm suuf luul + caaryada cusub ee caadiga ah ee Yurub
7 midab ikhtiyaari ah
Midabada waa la beddeli karaa markii la codsado
Sublimation Heather / daabacaadda shaashadda / daabacaadda
ilaalinta kuleylka, ilaalinta, keydinta
29 * 19 * 14.5 cm
Cabirka waa la beddeli karaa markii la codsado
Kartoon xirxiraya iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Isboortiga bannaanka, xilliga firaaqada iyo dalxiiska
OEM, ODM, Wakaaladda Sumadda
Miisaanka saafiga ah ee alaabada
Badeecada miisaanka guud
4. Xirxirida iyo gaarsiinta sanaadiiqda bento ee gabdhaha
(2) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 30 * 19 * 14.5CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 30CM X 40CM X 20CM. XXPCS / santuuqa Waxyaalaha kaartuunka: K = K 5 lakab oo ah warqad jiingado qaro weyn leh
(4) FCL miisaanka guud: 9.5KG.
(6) Qaabka gaadiidka: badda, cirka iyo dhulka.Waxaan dooran doonaa qaabka ugu haboon ee xagga saadka.
(7) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka xirxirashada boorsadaan baseball iyadoo la raacayo shuruudahaaga.
(8) Hadaad ubaahantahay shaybaarka boorsadan baseball-ka, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(9) Waxaan qaabeyn karnaa habka xamuulka ee keydinta xamuulka, laakiin tani waxay u hureysaa waxyaabo qaar, waxay sababi kartaa muuqaalka isbedelka sheyga, guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(1) Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu keydinno kharashyada.
(2) Waxaan xiriiri doonaa 24 saacadood maalintii.Waxaan si hufan ula xiriiri doonaa si loo hubiyo isgaarsiinta habsami ee macluumaadka.
(3) Iibinta shaybaarka kadib. Haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka, iyo dhammaan hannaanka soo saarista qaybtii labaad ee shaybaarka waa gebi ahaanba lacag la'aan.
(4) Sanduuqa boostadayada shirkadu waa mid si joogto ah waxtar u leh, shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee adeega macaamiisha ah, waad qori kartaa si aad ula tashato oo aad uga dacwooto wakhti kasta.
(5) Waxaan si adag u xakameyn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuu soo gudbin doonaa adiga oo leh qiime 100% u qalma.
(6) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabooyinka amarka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro wax soo saarka, si aad u ogaatid xaalada amarka si deg deg ah.
Q1. Mudo intee le'eg ayay kugu qaadan doontaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
A: Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno iimaylka ku-dalbashadaada.
Q2: Waa maxay awooddaada wax soo saar tiro badan?
J: (1) Soosaarkeena maalinlaha ah ee boorsooyinka fudud waa 50,000, waxsoosaarka billaha waa 1.5 milyan.
(2) howshu waa soosaaris aad u adag oo maalinle ah oo 3000, 100,000 soosaar bille ah.
Q3: Ma leedahay amarka ugu yar?
Q4ï¼š Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
J: Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka Shiinaha, bacda wax soo saar Shiinaha, ma ahan ganacsade.
Q5ï¼šWaa maxay shuruudahaaga bixinta?
A: & lt; = 1000USD, 100% bixinta kahor.
> = 1000USD, 30% T / T ka hor, 70% D / Bixinta.
Q6. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga? Miyaad siisaa shaybaarka?
J: (1) Waxaan kuusoo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad ubaahantahay inaad bixiso khidmadda tooska ah ee lagaarsiinayo Shiinaha ilaa wadankaaga.
(2) 7-10 maalmood oo shaqo oo ah shaybaarro la qaabeeyey iyo 48 saacadood oo loogu talagalay tijaabooyinka barta.
Q7: Ma dooneysid naqshadeynta alaabtayada, miyaad soo saari kartaa si waafaqsan sawirkeyga qaabeynta?
Jawaab: Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 500-1000 waa 30-35days.
Wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan waa in lagu hagaajiyaa heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibaatada soo saarista qalabka. Sawirada la bixiyay ama shaybaarada waa in la hubiyaa si loo go'aamiyo meertada wax soosaarka saxda ah.
S9: oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa sheegashadu tahay?
Jawaab: (1) xigasho oraah sawir qaadis ah, xigasho ahaan sida ku xusan qoraalka nashqadeynta alaabta, oraah sida ku xusan tusaalaha la soo saaray.
(2) Muddada oraahda ee sheyga keliya waa 12 saacadood, iyo muddada oraahda ee dufcaddu ay tahay 2-3 maalmood.
(4) Haddii aad u baahato oraah, fadlan la soco habka xigashada, kaas oo noo suurtagelin kara inaan si fiican kuugu soo bandhigno.
Q10aad. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga? Miyaad siisaa shaybaarka?
Q11: Miyaad aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Miyaad soo bandhigi kartaa warbixinta tijaabada alaabta? Sidee ku saabsan tayada wax soo saarkaaga?
(3) Waxaan nahay soo saaraha sheyga Disney baseballbackpacks, boorsooyinka Wal-Mart iyo Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka alaabtayada.
S12: Miyaad alaab u dirtay Amazon kahor?
J: Haa, waxaan haynaa dukaan u gaar ah Amazon.
S13: Aaway dekeddii ugu dhoweyd?
J: Waxaan fadhinaa Dongguan, markaa badiyaa dekeddeenu waaShenzhen ama Hong Kong.
S14: Ma jiraan wax kala duwanaansho midab ah ama 1cm ah oo u dhexeeya sawirka iyo waxa dhabta ah ee midab ahaan iyo cabir ahaanba?
J: Midabka dhabta ah ee badeecada ayaa waxyar ka duwanaan kara midabka ka muuqda sawirka sababo la xiriira bandhigyo kala duwan iyo iftiiminta.
Calaamadaha kulul: Sanduuqa qadada ee gabdhaha, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka
Bacaha qadada ee haweenka
Bacaha qadada ee dahaaran
Bacda qadada ee carruurta
Xirmada qadada dadka waaweyn
Boorsada qaboojiyaha qadada